Xukuumadda Rooble ma meel-marin kartaa sharciyo cusub? | KEYDMEDIA ONLINE
Xukuumadda Rooble ma meel-marin kartaa sharciyo cusub?
Dastuurka qodobkiisa 60-aad wuxuu dhigayaa in marka uu dhamaado mudo-xileedka dowladda ay hay'adaha fulinta sharci dejinta iyo fulinta noqonayaan sii-hayeyaal.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xukuumadda waqtigeedu dhacay ee Rooble ayaa Maanta ansixisay Sharciga Siyaasadda Qaran ee Howl-gabka iyo Liil-tirka Shaqaalaha Rayidka ee Dowladda xili aysan haysan wax sharciyad ah oo go'aano uga gaari karta masiirka dalka.
Waxay sidoo kale Gollaha Wasiiradda Shirkoodii Maanta ku magacaabeen xubin Guddiga Madaxa-banaan ee Xuduudaha iyo Federaalka, waxaana lagu dhageystay shirka Warbixinno la xiriira COVID-19 iyo Amniga Qaranka.
Dastuurka KMG ee Soomaaliya qodobkiisa 60-aad wuxuu dhigayaa in marka uu dhamaado mudo-xileedka dowladda ay hay'adaha fulinta sharci dejinta iyo fulinta noqonayaan sii-hayeyaal.
Xukuumadda ama Madaxweynaha midna Awood Dastuuri ah uma lahan inay heshiisyo saxiixaan ama sharciyo meel-mariyaan, maadaama waqtigooda dhamaaday, dalkuna uu ku jiro firaaq dastuuri ah iyo marnaasho dhanka awoodda.
Wadanka waxaa kaliya lagu sii wadi karaa shaqadiisa Qaranka heshiis siyaasadeed ay saamileyda gaareen oo KMG ah, kaasoo shaqeynaya inta laga soo dhisayo Baarlamaanka iyo dowlad cusub, oo doorasho ku yimid.